Iyo mailer bhokisi pamusoro yakapera iri mumatte / glossy lamination. Tinogona goridhe / sirivheri kupisa kutsika, gwapa UV, nekusimbisa, nebefu Logo nezvimwewo zvaunoda. Nezve saizi yemabhokisi, sezvo isu kugamuchira gadzirisa zvigadzirwa. Isu tichakupa iwe nyanzvi zano kana isu tichiziva zvigadzirwa zvauri kuenda kurongedza mubhokisi. Iko bhokisi repepa rinogona kushandiswa mune chipo, zvipfeko, kunotenga, zvizoro, pizza kurongedza nezvimwewo. Kwete chete iwo mutengo unokwikwidza uye wakanaka, asi zvekare vane hushamwari hweEco.
Isu tinotarisa pakuvaka zvinhu zvitsva uye hunyanzvi hwetekinoroji,inoshandiswa kupaka &kudhinda minda. Isu takasimbisa edu matanho ekugadzira ,kurongedza, kuverenga zvekare, kudhinda, kusunga uye kugadzirisa zvinhu; isu taive neepamusoro-chinzvimbo chepamusoro kudhinda kugadzira michina michina;isu takabatanidza rakanakisa kudhinda bhizinesi, yakasimbisa kubatana kwakanyanya navo,sarudza isu ,unosarudza nyanzvi & ruzivo mugadziri.
Sevhisi OEM,ODM kana Yakagadziriswa
Mashoko CCNB Duplex bhodhi ine grey kumashure
SBS chena kadhi bepa
Kudhinda Kudhinda neoffset:CMYK,Pantone Maximize 6 mavara
Flexo graphic Kudhinda:Pantone Maximize 6 mavara
Yapedza Maitiro Gloss aqueous varnishing
Gloss epurasitiki firimu lamination
Matt epurasitiki firimu lamination
Chitupa SGS,Rosh,ISO9001, ISO14001
Kurongedza kraft bepa kuputira,shrink warp,mapepa pallets
Zvigadzirwa nemhepo kana negungwa
Mhando dzekorori Mari yehuori / 30cm Kureba kwekoriori
C 40± 2 3.5~ 3.7mm
2.12 makore ’ruzivo, Isu tiri vagadziri
3.Vanoziva Vashandi, Professional Service
4.Madhiraini Madiki Akagamuchirwa / mifananidzo yakagadziriswa inogamuchirwa
5.Nyanzvi yekugadzira, wedzera yemahara dhizaini sevhisi
6.Mhando yepamusoro, mutengo wakanakisa, kukurumidza kuburitsa
7.Uchave nemutero wakakura kana kasitoma kodhi ikasvika zana mazana
1.Mubvunzo: Uri mugadziri kana kambani yekutengesa ?
A: 100% fekitori + 10 makore + 5600 mativi emamirimita.
2.Mubvunzo: Unogona kugamuchira OEM kana ODM?
A: Ehe, iwe unongoda titumire yako dhizaini, isu achapa yedu yakanakisisa chitaurwa mukati 24 maawa.
3.Mubvunzo: Iwe unopa sampuli? Zviri zvemahara?
A: Muenzaniso Uripo wemahara, inogona kununura ipapo. Yakasarudzika sampuro inoda sampuro yekuchaja, ichapedzwa mukati me3-7days. Mari yekutakura ichave iri padivi pako.
4.Mubvunzo: Unogona kuita dhizaini kwatiri?
A: Ehe, Isu tine timu yehunyanzvi ine ruzivo rwakapfuma mukugadzira zvigadzirwa zvemapepa.
5.Mubvunzo: Imhandoi yemifananidzo faira fomati yandinofanira kukupa iwe yekudhinda?
A: PDF,AI,CDR,PSD,Adobe,Zvikuru IDraw, zvichingodaro.
6.Mubvunzo: Ungaita sei kuve nechokwadi chekuongororwa kwemhando?
A: Pane maitiro ekuraira,tine chiyero chekuongorora tisati taendesa uye tichakupa mifananidzo.